ढाका टोपी लाएर रातो कारमा सरर महरा ! - NEPALI TV AUSTRALIA
ढाका टोपी लाएर रातो कारमा सरर महरा !
NTV NPL Sunday, October 6, 2019
काठमाडौं– बलात्कार अभियोगमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन् । उनी आइतबार साँझ आफ्नै कारमा प्रहरीसँगै गएको जनाइएको छ । उनी रातो निजी नम्बर प्लेटको कारमा ढाका टोपी र हाफ वेस्टकोट र चस्मा लगाएको हुलियामा देखिन्छन् । कारको पछिल्लो सिटमा बसेका उनी तनावको मुडमा देखिएका छन् । सभामुख निवासबाट बाहिरिँदै गर्दा महरा अघिल्तिर चालक सहित अर्का एक जना देखिन्छन् । उनलाई आइतबार महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएको बताइएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएसँगै प्रहरीले आइतबार महरालाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै महरालाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई पक्राउ गर्न नयाँ वानेश्वर वृत्तको प्रहरी टोली पुगेको थियो ।महरामाथि संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार गरेको आरोप छ । उनीविरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता अनुसार जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चल्नेछ ।
आफूमाथिजबर्जस्ती करणी प्रयास भएको भन्दै शुक्रबार रोशनी शाहीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । महराले शाहीमाथि बलात्कार गरेको सनसनीपूर्ण समाचार एक अनलाइनले सार्वजनिक गरेको थियो । सो समाचारपछि रोशनीले दवावमा परेर खण्डनको प्रयास समेत गरेकी थिइन् । अहिलेलाई महराले आफूलाई लगाइएको कसूर झेल्नेछन्। र, आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने मौका पाउनेछन्। तर प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा दोषी ठहर भएमा उनले कैद सजायँ भोग्नुपर्नेछ।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।बलात्कार कसूरमा ७ देखि १० वर्ष सजायँ भएमा प्रयास गरेको अवस्था पुष्टि भएमा साढे ३ देखि ५ वर्ष सजायँ हुन सक्छ। महिराले उजुरीमा बलात्कार प्रयास गरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।